Inona no atao hoe testera vatosoa? Fitsapana diamondra? Vaovao farany 2021
Tsy misy mpikaroka matevina azo itokisana azo itokisana. Misy karazany am-polony maro, saingy tena tery izy ireo, izay tsy manaporofo ny maha-azo itokiana vato.
Mampalahelo fa ity dia iray amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny mpivarotra kavina.
Raha mijery ny sary ianao dia hahita mpanapaka misy isa manomboka amin'ny ankavia ka hatramin'ny ankavanan'ny 1, 2, 3, 4, 5….
Ny LEDs dia mamiratra rehefa manohina ny tampon'ny vato ianao. Hitanareo ny isa izay mifanaraka amin'ny hamafin'ny vato.
Tena marina ity fampahalalana ity. Izany no lanjan'ny fahasarotana, antsoina koa hoe scale Mohs
Ohatra amin'izany ny fahasamihafana eo amin'i Mohs
8 - Topza
10 - Diamondra
Ny refin'ny Mohs amin'ny hamafin'ny mineraly dia miankina amin'ny fahafahan'ny santionana mineraly iray. Ny santionan'ny zavatra ampiasain'i Mohs dia mineraly samihafa. Ny mineraly hita eo amin'ny natiora dia solida madio. Misy mineraly iray na maromaro koa manao vato. Amin'ny maha-zava-maniry voajanahary faran'izay mafy fantatra azy indrindra, rehefa namorona ny refy i Mohs, dia eo an-tampon'ny mizana ny diamondra.
Ny hamafin'ny fitaovana iray dia refesina amin'ny refy amin'ny alàlan'ny fitadiavana ireo fitaovana sarotra indrindra ao anaty vato, ampitahaina amin'ny fitaovana malefaka indrindra amin'ny fikikisana ilay fitaovana. Ohatra, raha misy akora sasany azo esorina amin'ny apatite fa tsy amin'ny fluorite, ny hamafin'ny mizana Mohs dia hianjera eo anelanelan'ny 4 sy 5.
Ny hamafin'ny vato dia noho ny singa simika
Koa satria ny vatan'ny synthetique dia mitovy ny akora simika toy ny vato voajanahary, ity fitaovana ity dia hampiseho aminao ny valiny mitovy amin'ny vato voajanahary na synthétique.
Noho izany, ny diamondra voajanahary na sentetika dia hampiseho anao 10. Ruby voajanahary na sentetika dia hampiseho aminao 9. Mitovy amin'ny safira voajanahary na sentetika: 9. Ary koa ho an'ny quartz voajanahary na synthetic: 7…